DHAQANKAGA HA UNICIN MID AAD MANTA UUN TIMI(qormo Muhim ah. | Dadaab Refugee Camps
DHAQANKAGA HA UNICIN MID AAD MANTA UUN TIMI(qormo Muhim ah.
July 10, 2012 | Filed under: News in Somali | Posted by: admin Beenta taala qurbaha ee loo dhisay dumarka marka hore waxaa laga dhaa dhiciyay waxaa leedihiin xa quuq sare taas oo ah mid aan waxba ka jirin . waxaad ku cadaan kartaa in aan wax ka jirin karamada hooyada marka laga hadlo wax lagu soo koobi karaa majiraan sida diintana suuban sheegtay.halka laakiin waa wax liidata waana lawada arkaa taas hooyo waxaay dhashay ay ka sidata ama bisad ka wadataa waa arrin xun oo aan marnaba caadi ahaan. ninka hooyadii daryeeli waayey maa dumar ka leh xaq siinayaa waa mayaa . runtu waa mayaa laakiin waxa la sii yaabay dadka aamiinsan ninkaa oo aay ka dhaadhacsan tahay wax buu kuu qabanayaa.
Markaa la fiiriyo dhankeena wanaagsan ee ku salleh diinta islaamka waxa uu farayaa hooyada iyo aabaha waa lawada garanayaa halkay ka joogaan. bulshada islaamka maan arkin hooyo xaqeeda loo diidaan yahay laakiin dumarka meesha lagu gaasiray amaba aay xaq ku waayeen. ee ay qurbaha ka heleen hadaay tahay ninkeeda iyo ladhaqaan keeda halhas waxaa u ah wadankani waa diuqraadi.
Marka la fiiriyo dumarka soomaliyeed ee ku nool wadama kala duwan oo qurba ah waxaad arkaysaa hooyo wadataa 4 carruur ah taas oo aan nayhan aabahood waxay ku waaydiisanaysaa caawimaad amaba sidaa lagu yaqaan raga soomaliyeed waay u naxaa dhanka dumarka marka loo eego adduun wanaha ka leh. markaad dhahdo wllo qab maad abohood kaga timaado waxay kuugu jawaabaysaa waan kala tagnay halsano ka hor baa noogu dan baysay. waad dareemi kartaa arinta kala dirtay hadaad ku nooshahay qurbaha laakiin hadanad ku noollan waxay ku gu qaadanaysaa mudodheer in aad fahanto.
Wax ka leh maha diimuqradiga iyo beenta loo soo dhisay ee anay fahmin dhanka loo wado laakiin waxaa loowadaa iyada sidii cidlo loodhigi lahaa. markaa koobaad waxaa laga kaxanayaa saygeeda marka xiga waxaa laga kaxanayaa hadba ilmaha kora marka danbena waxaay ku soo dhacaysaa kaligeed. taas waxaa sii dheer ilmaha waxay la soo martay dhib aan la maqli karin oo aad looga naxo laakiin nasiibkeedu waxa uu dhigay cidlo waayo maay ka fiirsaan qoraalka khiyaanadu ku jirto ee ay hirgalisay qaadatayna.
hoyada wadan ka somaliya joogtaa haday ninkeeda kala tagaan dhib kuma hayo carruurtana waxay la noolyihiin dadkoodii haday karana waxa ayba noqonaysaa mid iska seexata 12 jirkiisuna waa masuul. halka kan uu ka yahay kan qurbuu carruur 30 jirkiisaa. dhibtay lamatray hoyada qurbuhu waa maah maah soomaliya baa ahayd rati caano ka lis waxaa is waadiin leh halkaay taala dimuqradagu ama maxaay tahay dimuqraadi ama maxaad u fahantay dimuqraadi.